QCS PCB Assembly - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Qaybaha gacanta Quality
Si loo hubiyo qaybaha in loo isticmaalo waa tayo fiican leh, waxaa jira geedi socodka badan oo aan raaco:
1. Sawir guud oo ah qaybaha elektaroonik ah geedi socodka kormeerka muuqaal ah waxaa ka mid ah:
* Baako baaro:
-Weighed oo laga fiiriyaa dhaawac
xaalad -Taping xirmo kormeero-diisan iwm
Warshadda -Original shaabadeeyey vs. non-warshad laga shaabadeeyey
* Waraaqaha Shipping xaqiijin
-Country ka soo jeedo
Si iyo lambarada si iibka -Purchase ciyaarta
* P-saaraha / N, tirada, taariikhda xaqiijinta code, RoHS
* Ilaalinta caqabad Qoyaanka xaqiijin (MSL) -vacuum laga shaabadeeyey laba iyo tilmaame huurka leh faahfaahinta (HIC)
* Products iyo baakadaha (sawiro iyo diiwaan)
* Body sixitaanka kormeerka (Calaamadayn yaraaday, text jabay, print double, stamps khad, iwm)
* Xaaladaha kormeerka Jirka (guutooyin hogaanka, xagashada, fuqa geesaha, iwm)
* Kasta oo khaladaad kale muuqaal ah laga helay
2. Engineering Qaybaha Inspection
Our injineerada xirfad sare leh oo loo tababaray helaan qaybaha ee qiimaynta heer cqaadir in la hubiyo joogtaynta iyo tayada. Kasta oo qaybo ka mid tuhunsan ama isdhaaf ah in la ogaado in geeddi-socodka kormeerka muuqaal ah sidoo kale waxa lagu xaqiijin doonaa ama laga dhimay by qaadashada sampling soo saarka oo ka mid ah waxyaabaha / qaybo ka mid ah.
injineernimada qaybaha electronic Geedi socodka kormeerka qaybinta waxaa ka mid ah:
* Natiijooyinka Review kormeerka muuqaal iyo qoraal
* Tirada Iibso iyo iibka amar xaqiijin
* Xaqiijinta sumadaha (codes bar)
* Saaraha ee logo iyo log taariikhda xaqiijinta
* Heerka dareenka Qoyaanka (MSL) iyo xaaladda RoHS
* Baaritaano joogto balaaran sixitaanka
* Review oo barbar-Xogeedka saaraha
* Sawiro dheeraad ah oo laga qaaday iyo diiwaan
* Solderibility Imtixaanka, tijaabada mari la dedejiyey habka 'gabowga' ka hor inta aan imtixaanay solderibility, inuu tixgeliyo saamaynta gabowga dabiiciga ah ee kaydinta ka hor Lewiston ee sii kordhaya, Waxa intaa dheer in ka Kooban Engineering ah Inspection waxaan leenahay heer sare ah oo kormeer ku hoos codsiga macaamiisha.
X-Ray Inspection Golaha BGA
hababka kormeerka iswada X-ray waa inay awoodaan si ay ula socdaan noocyo kala duwan oo dhinacyada kala duwan ee guddiga circuit daabacan ee wax soo saarka shirka. kormeerka la sameeyo ka dib markii habka kabida, si ay ula socdaan cilladaha in tayada kabida. Our qalabka waa inay awoodaan inay "arkaan" goysyada Alxan in hoos baakadaha waa sida BGAs, CSP iyo chips FLIP XAGGEE goysyada Alxan ka qarsoon yihiin. Tani waxay noo oggolaaneysaa in ay xaqiijiyaan in shirka lagu sameeyo midig. The cilladaha iyo xogo kale oo la ogaado by nidaamka kormeerka si dhakhso ah loo falanqeeyay karo iyo habka loo beddeli karin si loo yareeyo cilladaha iyo hagaajiyo tayada wax soo saarka final. Sidaas ma aha oo kaliya ay yihiin unu dhabta ah la ogaado, laakiin habka la beddeli karaa si loo yareeyo heerarka qalad ha ku dabaasho looxaan soo socda iyada oo loo marayo. Isticmaalka qalabka noo ogolaanaya si loo hubiyo in heerka ugu sareeya waxaa loo hayo in our shirka.
AOI kormeerka SMT
Sida farsamo imtixaanka koowaad ee shirka PCB, AOI khusaysaa kormeer degdeg ah oo sax ah qalad ama cilladaha ka dhacaya nidaamka shirka PCB si tayo sare leh kiniisadaha PCB in la hubiyaa karaa iin lahayn ka dib markii ay line shirka ka tago. AOI labadaba lagu saleyn karaa PCBs dhashay iyo shirkii PCB. Halkan PCB cajiib ah, waxaan inta badan codsan AOI inaad kormeerto SMT (dhulku Mount Technology) line kiniisadda iyo imtixaanka oo looxyada ku circuit dhashay, baaritaan duulaya waxaa loo isticmaalaa halkii.
In PCB Wonderful, qalabka AOI waxaa ku xiran tahay camera-qeexidda sare, qalab this qabsan kartaa images of dusha PCB iyadoo la kaashanayo ilo iftiin badan. Markaas, marka la barbardhigo lagu sameyn doonaa inta u dhaxaysa image iyo guddiga xuduudaha qabtay in ay ku aqbasho galay computer ka hor si kala duwan, aan caadi ahayn ama xitaa qalad in si cad loo tilmaamay karo by ay software processing dhisay-in. Geedi socodka oo dhan waa lala soconayaa karaa labaad kasta.
AOI waa contributive in ay horumar ku-oolnimada, sababtoo ah waxaa la dhigayaa on line shirka SMT, ka dib markii reflow. Sida ugu dhakhsaha badan dhibaatooyinka qaar ka mid ah waa la soo kormeeraa oo la sheegay by qalab AOI, injineerada isla bedeli kartaa dhiganta oo xuduudaheedu ku jira marxaladaha hore ee line kiniisadda si waxyaabaha harsan si sax ah soo ururay doonaa.
Cilladaha AOI dabooli ugu horayn ka imaan karto, kabida iyo qaybaha qaybaha. In la eego, kabida, cilladaha dhaxayn karo wareeggeedii furan, buundooyinka Alxan, gaab Alxan, Alxan ku filnayn in ay Alxan xad-dhaaf ah. cilladaha qayb ka mid ah kor u lead, qayb maqan, misaligned ama qaybaha dhigo.